Fantaro ny variana micron vaovao – avy amin’ny Covid-19 – Tandremo ny haino aman-jery lehibe manaitra! – JucelinoLuz
Fantaro ny variana micron vaovao – avy amin’ny Covid-19 – Tandremo ny haino aman-jery lehibe manaitra!
“Ny hany virus izay mamono dia ny vaovao diso…”
Misy mandainga amin’ny mponina eran-tany ve?
Águas de Lindóia, 25 Novambra 2021
Ny nofinofy dia manambara fa tsy misy io karazana vaovao tsy fahita firy io, ary tsy afaka mamindra be loatra izy io satria be dia be ny fiovan’ny toetr’andro, miaraka amin’izay koa, ny ilany iray dia mampiseho ahiahy (famantarana) lehibe amin’ny fampiasana ity onja vaovao ity, manery ny olona hanao vaksiny – ny tena tadiaviny dia ny fanaovana vaksiny ny olona tsy marary – niteraka hafahafa be tamin’ny fomba fiasa – araka ny taratasy nosoratana tamin’ny taona 2020, izay hasehontsika eto ambany. Na izany aza, ny variana B.1.1.529 an’ny coronavirus, izay hitan’ny mpikaroka afrikanina tatsimo hafahafa, dia tonga tamin’ny fotoana nanombohan’ny fampielezan-kevitry ny vaksiny manohitra ny Covid-19 eran’izao tontolo izao, miaraka amin’ny fihetsiketsehana sy fihetsiketsehana lehibe miaraka amin’ny vokatra ratsy, sy ny fahafatesana noho ny voka-dratsiny izay hitan’ny manam-pahaizana manokana sy mpahay siansa tsy miankina, izany hoe, tsy mifandray amin’ny governemanta sy ny manam-pahefana eran’izao tontolo izao, ary koa mifanitsy amin’ny fampielezan-kevitry ny haino aman-jery manaitra ny fiandohan’ny onja faha-5 amin’ny areti-mifindra amin’ny maro. firenena eoropeanina. Amerika sy Azia.
Fantaro izay efa fantatry ny mpahay siansa momba ity endrika vaovaon’ny viriosy ity … farafaharatsiny, izay lazainy – hajainay, fa tsy mino izahay.
Avy aiza ny variana omicron?
“Teatra lehibe nokarakarain’ny mpitondra sy manam-pahefana sasany eran-tany mba hifehy anao sy hampaharitra ny herinao! “
Ny anarana ofisialin’ny variana vaovao dia B.1.1.529. Tsy ela anefa dia nantsoina hoe litera amin’ny abidy grika izy io, ka nanjary fantatra eran-tany, tao anatin’ny ora vitsivitsy monja, ho ny karazany “omicron”. Izay no anarana ampiasain’ny manam-pahefana sy manam-pahaizana mifandray amin’ny mpitondra eran-tany.
Misy ny ahiahy lehibe fa tompon’andraikitra amin’ny laboratoara lehibe ireo tompon’andraiki-panjakana (ampahany amin’izy ireo) ka noho izany dia te hanery ny olona hanao vaksiny amin’ny fomba rehetra. Ary ny olona tsy vita vaksiny no kendrena – ahoana no ahafahan’ny olona salama mamindra ny viriosy? – Tsy ho mora kokoa ny mifehy ny olona voan’ny aretina!
Nosokajian’ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (WHO) haingana ihany koa izy, tafiditra ao anatin’ity olana lehibe mihatra amin’ny mponina rehetra ity.
Ary hiezaka ny handray andraikitra amin’ny vokatry ny vaksiny izy ireo ary hilaza fa ny olana dia vokatry ny variana vaovao – noho izany, mitandrema tsara amin’ny finoana ny haino aman-jery mahazatra manaitra sy ny mpahay siansa, ny dokotera, ny manam-pahaizana manokana mifandray amin’ireo manampahefana ireo ary governemanta eran-tany.
Tsy misy karazana, variana na mutations vaovao ve?
Tsy misy fiovana mihoatra ny 30, araka ny filazan’izy ireo, singa manan-danja raha oharina amin’ireo variana mampidi-doza hafa.
Faharoa, ny fahitana mialoha. mbola tsy hita tany amin’ny delta sy beta, fa ny hafa tsy fantatra… ary tsy haintsika hoe ho toy ny ahoana io fitambaran’ny mutation io. Ny viriosy dia mamono hatramin’ny 0.13 isan-jato fotsiny, mitombo ny fahafatesana amin’ny alàlan’ny olona maty noho ny tantaran’ny aretina hafa ary mifandray amin’ny virus – mitandrema!
Variant mamindra haingana kokoa?
Tsia, raha manana fanabeazana sy fanabeazana ara-pahasalamana isika – tadidio fa ny virus tsirairay dia mila mpampiantrano. Ary velona eny amin’ny rivotra mandritra ny adiny telo farafahakeliny.
Tohero ny vaksiny?
Tsy misy mahita . Tsy mandeha ary mbola manimba ny vaksiny ataon’ny mponina eran-tany – an’arivony ny tranga miafina, noho ny voka-dratsiny, izay miparitaka isan’andro, indrindra fa ireo vaksiny ireo dia mbola andrana sy vonjy maika. Hataon’izy ireo amin’ny alàlan’ny haino aman-jery mahazatra fa ireo variana dia afaka mampihena ny fahombiazan’ny vaksiny amin’ny ambaratonga izay mbola tsy voafaritra.
matotra kokoa noho ireo endrika teo aloha?
Fanontaniana lehibe hafa izany. Fomba iray ahafahana mametraka tahotra bebe kokoa amin’ny olona. Mampalahelo tokoa fa mbola misy olona jamba tanteraka sy mino izany! Mihazakazaka toy ny omby mba hahazoana ireo vaksiny andrana sy vonjy maika izay mampidi-doza ho an’ny olombelona. Herinandro latsaka no lasa hatramin’ny nahitana ilay variana, ary nanidina tamin’ny fiaramanidina supersonic izy ary hiparitaka haingana eran’izao tontolo izao! Andriamanitra ô, ampy ve ny fihatsarambelatsihy? Raha misy tokoa ny variana, izay tsy inoako, (famantarana fa…) dia olona nokaramain’ny laboratoara na mpiasam-panjakana maloto no mampiely izany.
Nitombo ihany ny tranga, noho ny didy sy lalàna tsy mifanaraka amin’ny lalàmpanorenana noforonin’izy ireo, izay mamela ny fitomboana haingana ary mamela ny fahafatesan’ny olona hafa amin’ny tantara samihafa ho lazaina ho covid19 – ary mba hisorohana ny fanadihadiana, ny ankamaroan’ny vatana dia nodorana.
Eto Brezila, tena manan-tsaina ny virus, mandingana ny karnavaly, tsy mandray mpanao politika, na manam-pahefana sasany, tsy mandeha bus, metro, ary gara be olona, ​​tsy mivoaka amin’ny fifidianana ary miala sasatra amin’ny Krismasy. , Taom-baovao sy fivoriana, antoko miafina ataon’ny mpanao politika sy ny manam-pahefana.(tsy misy généraliser).
Miangavy anao aho mba hampita haingana ity vaovao ity, zarao amin’ny namana, olona tianao sy tianao – satria manakana ny rohy foana izy ireo, na miteny hoe: – “Rohy tsy azo antoka” mba hisorohana izany tsy ho tonga amin’ny olona tsara. (ireo izay ho voadona). Heloka bevava manohitra ny maha-olombelona! Ho lasa tantara ratsy izany indray andro any!
Miala tsiny amin’ny vaksiny, fa raha mbola tsy nahomby hatramin’izao, maninona no hiasa ato ho ato – efa niaiky izany ny manampahefana rehetra, ho an’ny besinimaro!
Tsy fiampangana izany, fa vaovao sarobidy. Tsy manana fifandraisana ara-politika amin’iza na iza isika ary mainka fa ny manohitra ny vaksiny – raha tena mahasoa ny olombelona tokoa izany. Tsy tsikaritray izany hetsika goavana ho an’ny vaksiny izany.
Andriamanitra anie hiaro sy hitahy anareo rehetra!
Prof. Jucelino Luz – Mpanoratra, mpikaroka, mpiaro ny tontolo iainana, mpikatroka ary mpitari-dalana ara-panahy
Fahami varian mikron baharu – daripada Covid-19 – Berhati-hati dengan media besar yang sensasi!
Ifhem il-varjant il-ġdid ta ‘Omicron – minn Covid-19 – Oqgħod attent mill-midja kbira sensazzjonali!